မြန်မာ စတီးမစ် ချစ်သူများ အတွက် (@aggamun) — Steemit
မြန်မာ စတီးမစ် ချစ်သူများ အတွက် (@aggamun)steemCreated with Sketch.
aggamun (62)in #msu •2years ago
@mmunited ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှု ဖြင့် Discord #C-squared တွင် မြန်မာ #Steemit အသုံးပြုများ post အတွက် upvote တစ်ခုရဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ @c-squared က လာရောက် vote ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် resteem လည်း လုပ်သွားမှာပါ။ တခြားသူ များရဲ့ vote ရဖို့ အခွင့်အရေး ဖြစ်ပါတယ်။ @c-squared မှာ followers တစ်ထောင်ကျော် ရှိပါတယ်။ တစ်နည်း အားဖြင့် သင်၏ post ကို လူတစ်ထောင်ကျော် မြင်တွေ့နိုင်တော့မယ့် အခြေအနေ ဖြစ်ပါသည်။
vote ရအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
ဟုတ်ကဲ့ ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ @mmunited , @nayhlaingsoe နဲ့ ကျွန်တော် တို့ သုံးဦှး က နေ့စဉ် စောင့်ကြည့် ရွေးချယ် ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် တစ်ဦးကိုလည်း ထပ်မံ ခန့်အပ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ သင့် အနေဖြင့် ကောင်းမွန် ပြည့်စုံသော post များ ဖန်တီးထားဖို့ သာ လိုအပ်ပါသည်။
ဘယ်သူတွေ vote ရမလဲ။ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များ
အောက်ပါသတ်မှတ် ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော မြန်မာ steemians မည်သူ့ကို မဆို ရွေးချယ် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
reputation level 25 ထက်ကျော်၍ 60 အောက် နည်းသူ။
စာလုံးရေ ၂၀၀ ခန့် ရေးထားသူ။ ( စာကြောင်းရေ ၁၃ ကြောင်း ခန့် )
post ၌ tag တွဲရာတွင် myanmar ဟူသော စကားလုံး သုံးစွဲ ထားသူ။
rewards $3အောက် နည်းနေသူ။ ( upvote ပေးသူ ၈၀ အောက် နည်းသူ )
ဘယ်လို post မျိုးကို မရွေးချယ် မှာလဲ။
အဓိက ကတော့ steemit က ချမှတ်ထားတဲ့ မူကို မထိခိုက်ဘူး ဆိုရင် ရပါပြီ။ လုံးဝ ( လုံးဝ ) copy မဖြစ်ပါစေနဲ့။ သူတစ်ပါး ပုံ အသုံးပြုပါက မူရင်း link ကို ဖော်ပြ ပေးထားပါ။ ဒီလောက်ပါပဲ ခင်ဗျာ။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာများ #Steemit platform ကို ရေရှည် အသုံးပြုနိုင်ရန် အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် အနေဖြင့် အထောက်အကူ ပြုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
တခြား သိလိုတဲ့ အချက်များ ရှိပါက လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဗျ။
ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာက တော့ post ကို သပ်သပ် ရပ်ရပ်လေး ဖန်တီးထားရင် အကောင်းဆုံး ဆိုတာပါပဲ။ ဆိုတော့က အကောင်းဆုံး post များ ဖန်တီးဖို့က သင့်တာဝန်ပါ။ ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ဖို့က ကျွန်ုပ်တို့ တာဝန်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ မိမိတာဝန် မိမိ ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ရင်း အတူ လက်တွဲ ရှေ့ဆက်ကြရအောင် ဗျားးး။
Steemit Myanmar များ အောင်မြင်ပါစေ ……
image ref; @c-squared
#myanmar #kryptonia #superiorcoin #ccc
2 years ago in #msu by aggamun (62)
minsoenaing (63)2years ago (edited)
myanmar tag ပါရင်မည်သူ့ကိုမဆိုရွေးချယ်မယ်ဆိုတာ လူနည်းတုန်းတော့အဆင်ပြေမှာပါ၊လူများလာရင်ရွေးချယ်ဖတ်ရှုဖို့အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်၊ နောက်ပြီး copy ဟုတ်မဟုတ်ရွေးချယ်ဖို့လည်းခက်ခဲမှာပါ၊ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်ဘာသာစည်းကမ်းညီပါတယ်လို့တာဝန်ယူနိုင်သူကို ရွေးတာပိုကောင်းမယ်
ကျနော် တို့ အဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ စည်းကမ်းချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ သုံးသပ်ဦးမှာပါ ဟုတ်
ayeayethaw (45)2years ago
I see the use of #ccc tag and mentioned of @mmunited,amember of #ccc, but do not much understand the post.
If I understand, using the tag #myanmar and write posts of 200+ words seem to be fit within the same rules of #ccc.
To qualify for full benefits, I'll need to knowalittle more about your intentions in using #ccc and if you intend to join as @mmunited has or recommended, please add the required code and also check out the other #ccc posts - especially #ccc contests.
nayhlaingsoe (55)2years ago
@freedomshift က လာပြောနေပါတယ် ဘရို။ သူ့ကို ပြန်ပြောလိုက်ပါဦး။ #ccc tag ကို သူ့ code မပါပဲနဲ့သုံးလို့မရပါဘူး ဘရို။ အဲ့ဒါဆိုရင် သူက upvote မပေးပါဘူး။ တစ်ခုခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို ပြောပါဘရို။ တစ်စုံးတစ်ခု အမှားပါသွားခဲ့လို့ အဆင်မပြေဖြစ်သွားရင် မကောင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တောင် အတော်သတိထားလုပ်နေရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် discord မှာ မြန်မာပိုစ့်တွေ ချရင် အချို့ discord တွေကအဆင်မပြေပါဘူး။ minnowsupport ကတော့ ရပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် သီးသန့်ပေးထားတဲ့ channel မဟုတ်ရင် အဆင်ပြေပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျနော်လည်း ခုတလော ဘာလုပ်လုပ် အမှား တွေချည်း ဖြစ်နေတယ် ဗျာ။ စိတ်အနှောင့် အယှက် ဖြစ်သွား ကျနော် စိတ်မကောင်းပါဘူး ဘဒို။ so sorry . I apologize. :'(
komoekyaw (43)2years ago
အားရပြီလေ။ ခုမှ ဒီပိုစ်ဖတ်မိတယ်။ ခရီးသွားရင်းအလုပ်တွေများနေတာရယ်စိတ်ညစ်စရာတွေရယ်ကြောင့်ပိုစ်မတင်ဖြစ်တာ
ကျနော်တို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားကြတာပေါ့ ဗျာ 👍
komgthet (48)2years ago
moewaikamawet (49)2years ago
အနှစ်ချုပ်က တော့ ဗျာ post တစ်ခုမှာ
စာလုံးရေ ၂၀၀ ကျော်အောင် စာတွေရေးသား ထားဖို့။
သင့်တော်ရာ ပုံ သုံးဖို့
ဒီလောက်ဆို ရပါပြီ။ အန်တီရဲ့ post တွေက ပြည့်စုံ သလောက်ရှိပါတယ်။ စာသားတွေ နည်းနေလို့ပါ။ စာသား တွေ များများ ပါအောင် ရေးရင် ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ် ပေးလို့ရပြီလေ။ ဟုတ် ကျေးဇူးပါ 😍